Autumn - isikhathi sokuqoqa amakhowe. Yiqiniso, zikhula ehlobo futhi entwasahlobo, futhi ezinye izinhlobo zawo ngisho ebusika. Kodwa mushroom kwesokudla - ekwindla. Ngasiphi lokushisa sikhule amakhowe ekwindla? Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe siqale siqonde ukuthi hlobo luni selitulu mikhiqizo ihlathi.
Kwesizini ukukhula ikakhulukazi fungal
Mushrooms - a eziphilayo eziyinkimbinkimbi. Iningi lazo - the mycelium noma mycelium - isitheke emehlweni humus ungqimba ehlathi, futhi phezu kobuso kukhona kuphela izidumbu fruiting, okuyinto ukuheha amakhowe pickers. I mycelium likhula unyaka wonke, ngakho impendulo yombuzo izinga lokushisa lapho amakhowe sikhule ekwindla, akulula.
Kanye umswakama, omunye izimo ebaluleke kakhulu iningi fruiting zilwane emhlabeni efudumele. Ngakho-ke, amakhowe athoma ukuvela entwasahlobo. Ngo-April-May, lapho ukushisa kuze ekhululiwe ukuhlanzwa iqhwa, ukusika nokusha ehlathini, kukhona morels nemigqa. Bavula isizini mushroom, bese sithathe baton nezinye isikhunta.
Ngasekupheleni Meyi futhi ekuqaleni kuka June, emva kwezimvula efudumele oluzovela kuqala Mokhovikov, boletus, ngisho ezimhlophe. Kodwa lena kuphela scouts, ungqimba base kuyoba kamuva, lapho zakolositsya rye. By the way, lezi amakhowe kuthiwa edume ngokuthi - kolosoviki.
Aspen, noma njengoba bebizwa bokuzisholo, krasoviki, krasnogoloviki avele ngemva kwesikhashana, lapho ihlumela aspen. Ngesikhathi esifanayo, qaphelani kusukela utshani izigqoko ezimibalabala syroezhek, futhi, njenge orange ubuhlalu, ehlakazekile moss bevy gay ka chanterelles.
Kodwa ehlobo izingqimba iDemo - ngesonto, kakhulu ezimbili, futhi amakhowe zinyamalale, njengoba babebase ayikaze. A ukhunta yangempela ikhula kuphela ekwindla, lapho ziqala ukumkhafulela igolide birches langelembu plesnet amaqabunga aspens.
Ikhalenda zokukhula fungal
Ukuze njengoba enemininingwane ngangokunokwenzeka ukugqamisa le nkinga, sebenzisa izinto ezibukwayo. Ngezansi ithebula ekutshela nini futhi kanjani "isilo" kungcono ukuya ehlathini abalandeli "ukuzingela sokuthula '.
Amakhowe ihlathi autumnal
Ekwindla zikhule cishe zonke izinhlobo mushroom ehlobo, kodwa kukhona amasha futhi, labo ehlobo kushisa kakhulu. Lokhu, isibonelo, uju ekwindla agaric, greenfinch, blewits nabanye. Ngaphezu kwalokho, ukuwa ukukhula isikhunta, okukhulu kakhulu, ngoba ungathandi ukushisa, futhi ukuqinisekisa ukuthi umzimba izithelo kwezinhlobo eziningi waqala ukuthuthukisa okwanele 5-10 ° C. lokushisa lapho amakhowe sikhule ekwindla kuthinta ijubane ukuthuthukiswa kwawo: degree aphansi, kancane zikhula.
Nokho, kukhona okukhulu hhayi kuphela lokushisa ukufundwa kodwa futhi umswakama. Uma ekwindla esomile, ke "catch" amakhowe omuhle ungethele ukubala. Nokho, izimvula eside futhi ungathandi. mushroom abanolwazi libukeka omunye isiphepho yanqamula emgwaqweni nge amaxhaphozi, futhi kuyadabukisa bayabubula: "Oh, vymoknet eziyizimbangela!" mycelium akuyona neze vymoknet, izohlala ngaphansi obukhulu ihlathi udoti izinaliti awile moss, kodwa amakhowe ngempela akukwazi.
Kodwa yesithwathwa ukukhanya ukuthi ziyinsakavukela ekwindla, amakhowe akuzona esabekayo. Ngezinye izikhathi ezibandayo Okthoba ekuseni ehlathini ingatholakala ezimhlophe ngokoqobo iqhwa, boletus, krsnogoloviki, ibhotela amakhowe, amakhowe. Ekunqumeni lokushisa lapho amakhowe sikhule ehlathini in autumn, kufanele ugxile amanani ngokwesilinganiso nsuku zonke njengoba indima enkulu eyadlalwa Ukushisa zenhlabathi emini.
Lapho frost hit
frost ezinzima angaphila ezimbalwa zalezi zasehlathini, futhi iningi mushroom ukholelwa ukuthi inkathi uphela ngo-November. Kodwa lokhu akulona icala.
Ezinye isikhunta abandayo ukumelana kakhulu - amakhowe. Amazinga kangcono ukukhula kwabo uye zazisuka +8 ... +12 ° C. Bawumkhaya ezihlekisayo kancane ukhule ehlathini futhi emva yesithwathwa ezinzima. Ngasiphi lokushisa sikhule amakhowe ekwindla? Winter amakhowe, isibonelo, kungatholakala okushisa sub-zero, ngisho ngaphansi eqhweni.
Asesabi kubanda futhi oyster ebusika, engesiyo into ngoNovemba, futhi ngoJanuary ingalandwa.
izimo Ukukhula ceps
Kungakhathaliseki ukuthi egcwele mushroom ukutomula kwesitsha, kodwa inhlanhla yakhe wahlulelwa ngokuyinhloko ngenani amakhowe amhlophe.
White, noma njengoba ibizwa, boletus - amakhowe zobuqili fastidious. Ngezinye izikhathi, kuyadingeka ukuze uthole emhlabeni phansi ehlathini ukuhlasela endaweni amakhowe. Kodwa uma izimo ezilungele kwakhiwa, ngisho lelincane ongabashayela angaphezu kweshumi nambili Borovichka eqinile.
A izinga lokushisa lapho ekhula amakhowe amhlophe ekwindla? Okokuqala, phawula ukuthi elimhlophe akuyona isimo njengoba ebalulekile emoyeni, umhlabathi kangakanani. Amazinga elikhulu for umhlabathi kuba 15-16 degrees.
Kodwa njengoba emoyeni, izimo ukukhula amakhowe amhlophe ehlobo kanye autumn zihlukile. Summer amakhowe ungathandi umswakama ngokweqile nezimvula isikhathi eside uthanda okushisa +18 ... + 20 ° C no-ke kufihliwe e moss futhi ngaphansi imilenze obukhulu amafutha lapho akusiyo kushisa kakhulu.
Kodwa engxenyeni Septhemba yesibili, sezulu eRussia emaphakathi awavamile ozitika ukushisa. Ngasiphi lokushisa sikhule amakhowe ekwindla? Kusukela ngo-September imodi eliphezulu ukukhula cep kuyinto 10-15 degrees. Futhi yesithwathwa ebusuku bengagxambukeli. Into esemqoka ukuthi usuku azithinta emoyeni nasenhlabathini.
Lapho lokuqoqa ekwindla boletus
Boletus, ikakhulukazi umusha futhi uyingqabavu, neze kunabayeni emhlophe - Nokho ngamathumba, nakuba ezomile, ngisho gazinga. Futhi uma ulale, ungakwazi uwafake esinengekayo elincane hhayi omunye ebhakedeni.
Ngokusho izimpawu kazwelonke, boletus kuqala kuvela uma yokuqhuma Rowan, bese ehlobo musa ukushiya glades ihlathi kanye birch amahlathi. Ngaphandle Yiqiniso, ehlobo wayengekho hot kakhulu futhi lomisile. Kodwa kukhona boletus ehlobo yayinesithiyo esisodwa - kuba kakhulu othanda leli khowe isihlava okumnandi. Lokho mushroomer ngokungathandi baphonse mushroom ngezindawo.
In autumn boletus ehlanzekile eqinile. Futhi nje, kukhona uhlobo olukhethekile - imilenze obukhulu isigqoko esimnyama, ukunambitha cishe nsé emhlophe. Thola Nokho, ke, bawa eshiya nzima. Kodwa uma omunye wabanjwa, khona-ke cishe it, ungathola ngiyafa.
Ngasiphi lokushisa sikhule amakhowe ekwindla (boletus)? izimo lokushisa banayo cishe iyafana ukuthi abamhlophe. Boletus anele 10-12 degrees, kodwa lezi amakhowe afana sezulu zinomswakama ngaphezulu, izimvula esingeside futhi obukhulu ekwindla inkungu. Futhi uma isiphambeko esomile, kudingeka ubheke boletus ezindaweni eziswakeme, emathafeni, futhi ngisho ixhaphozi.
mushroom Good uyazi ngasiphi lokushisa amakhowe zikhule. Autumn ehlathini, lapho ngokushesha sithathe kubhasikidi, bese bangazuza iphakethe - hhayi ukushiya izihlahla kanye birch boletus emhlophe nephuzi, e-aspen futhi boletus, amakhowe futhi volnushki! Futhi uma ehlaselwa ku amakhowe, ngakho iyiphi amaphakethe kungase kunganeli.
South Ural Reserve (isithombe)
Kezenoi Am Lake, Chechen Republic: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso